अब यो देश उड्न लागेका नेपालीहरु लाई तनाब कारण यस्तो छ ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
अब यो देश उड्न लागेका नेपालीहरु लाई तनाब कारण यस्तो छ !
काठमाण्डाै | इजरायलले विदेशी नागरिक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्राेन’ को जोखिमका कारण पूर्वतयारी र रोकथामका लागि विदेशी नागरिक प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको इजरायल सरकारले जनाएको छ । उसले सबै नाकाहरु समेत बन्द गराउने भएको छ ।